नयाँ पुस्ताका कलाकार चुनावबारे पूरै बेखबर
सिर्जना खड्का सोमवार, कात्तिक २७, २०७४ 2431 पटक पढिएको
काठमाडौं : चुनाव लोकतन्त्रको उत्सव हो । अहिले सिंगो देश र सारा जनता यही उत्सव मनाउने तर्खरमा छन् । लोकसँग जोडिएर मनोरञ्जन प्रदान गर्ने नयाँ पुस्ताका कलाकार भने लोकतन्त्र यही उत्सवबारे बेखबरजस्तै छन् । नयाँ पुस्ताका अभिनेता तथा अभिनेत्रीलाई चुनाव केको हो ? कति चरणमा हुँदैछ ? प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा भनेको के हो ? जस्ता सामान्य जानकारीसमेत छैन । उनीहरूको राजनीतिक चेतनास्तर कमजोर देखिन्छ ।
नयाँ पुस्ताका अधिकांश कलाकारका निम्ति चुनाव ‘नजाने गाउँको बाटै नसोध्नु’ सरह भएको छ । उनीहरूलाई राजनीतिप्रति सामान्य चासो पनि छैन ।नयाँ पुस्ताका धेरै कलाकारले अहिलेसम्म भोट नै हालेका छैनन् । धेरैको मतदाता नामावलीमा नामसमेत छैन । त्यसमध्ये एक हुन्, अनुपविक्रम शाही । चुनावी माहोलले देशलाई छोपिसकेको भए पनि उनी भने बेखबर छन् । ‘खै चुनाव भनेको त सुनेको हो तर, के चुनाव ? कस्तो चुनाव ? त्यो चाहिँ थाहा छैन,’ उनी भन्छन्, ‘मैले त अहिलेसम्म एक पटक पनि भोट हालेकै छैन ।’
यतिमात्र होइन, उनलाई देशमा अहिले को-को नेता चर्चामा छन्, सरकारमा को-को छन् भन्ने पनि जानकारी छैन । आफ्नो यो अज्ञानबारे उनको स्पष्टीकरण छ, ‘स्थिर सरकार भए पो यो-यो छ भनेर थाहा हुन्छ । तीन÷चार महिनामा फेरिने सरकारबारे चासो राखेर साध्य पनि त हुँदैन ।’
उनी भन्छन्, ‘हाम्रा लागि त चुनाव भनेको ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात’ भनेजस्तै हो । हामी नेता हैन, अभिनेता हौं । अभिनेताले राजनीतिमा किन चासो राख्नुपर्‍यो ? ’
जनताले आफ्नो प्रतिनिधि चुन्ने खास माध्यम चुनाव हो भन्नेमा अभिनेता शाहीलाई विश्वास छैन । उनको चुनावप्रतिको धारणा उदेकलाग्दो छ । भन्छन्, ‘चुनाव भनेको जनतालाई दुःख दिने बाटो हो ।’ उनी यतिबेला तनहुँको दमौलीमा फिल्म ‘आर्या’ को सुटिङमा व्यस्त छन् । ‘सुटिङको बेलामा काममै ध्यान हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘कुवाको भ्यागुतो जस्तै भइन्छ । देशमा के भइरहेको छ थाहै हुँदैन ? त्यसमाथि राजनीतिमा चासो राखेर के नै हुन्छ र ? ’
अभिनेत्री बेनिशा हमालले निर्णय गरिसकेकी छिन्- यसपालि चुनावमा भोट नहाल्ने । उनको गृह जिल्ला चितवन हो । जहाँबाट माओवादी केन्द्रका नेता तथा देशको राजनीतिका केन्द्रीय पात्र पुष्पकमल दाहाल चुनाव लड्दैछन् । तर, बेनिशा यसबारे पूरै बेखबर छिन् । भन्छिन्, ‘मलाई आफ्नो ठाउँबाट को उठ्दैछ भन्ने पनि थाहा छैन ।’ उनी ठान्छिन्, चुनाव नेतालाई मात्रै लाग्ने हो।
‘हामी कलाकारलाई त फिल्म लाग्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘चुनाव त नेतालाई लाग्छ ।’ उनका निम्ति राजनीति भनेको अन्धभक्तहरूको काम हो । ‘कलाकारले राजनीतिमा चासो किन राख्नुपर्‍यो ? ’ उनको प्रश्न छ, ‘कलाकारले राजनीति गर्नुहुन्न भन्ने कथनै छ नि ।’ राजनीतिमा कुनै चासो नराखे पनि उनलाई दुईजना नेता भने मन पर्छन् । ‘केपी ओली र रवीन्द्र मि श्र मलाई मनपर्ने नेता हुन्,’ उनी भन्छिन् ।
उता, अभिनेता पुष्पल खड्काका निम्ति चुनाव भनेको नौटंकीमात्र हो । भन्छन्, ‘चुनाव आयो रे भन्छन् । के आयो, के आयोजस्तो लाग्छ । देशमा यत्तिका चुनाव भए, जनताले सुख पाए त ? विकास भयो त ? त्यसैले मलाई त चुनाव नौटंकी लाग्छ ।’
अभिनेत्री वर्षा शिवाकोटीलाई पनि चुनावबारे खासै ज्ञान छैन । सुटिङका लागि मंसिरदेखि माघसम्म उपत्यकाबाहिरै रहने सीतापाइला काठमाडौंवासी उनले भोट हाल्न पाउने छैनन् । भन्छिन्, ‘भोट हालेर पनि के नै हुन्छ र ? सबैजना भाषणमा तात्तिन्छन्, काम गर्नुपर्‍यो भने पूरै सेलाउँछन् । के भोट हाल्नु ?’
‘ए मेरो हजुर-२’ फिल्मबाट एकाएक चर्चामा आएका अभिनेता सलिनमान बानियाँले पनि अहिलेसम्म भोट हालेका छैनन् । हाल देशमा कस्तो खालको चुनाव भइरहेको छ भन्ने उनलाई जानकारी छैन । ‘म पोलिटिक्समा खासै चासो राख्दिनँ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले कहाँ के भइरहेको छ, मलाई केही थाहा छैन ।’ कसलाई भोट हाल्ने भन्ने सम्बन्धमा उनको आफ्नै ‘नियम’ छ । ‘परिवारका जेठाबाठाले जसलाई भोट हाल् भन्छन्, उसैलाई भोट हाल्छु ।’
हालसालै रिलिज भएको फिल्म ‘ऐश्वर्य’ की मुख्य अभिनेत्री दीपिका प्रसाईं पनि चुनावबारे पूर्णतः बेखबर छिन् । उनी आफूलाई राजनीतिको क, ख, ग पनि थाहा नभएको बताउँछिन् । भन्छिन्, ‘राजनीति एक त बुझ्न गाह्रो छ । त्यसमा पनि हामीजस्ता नयाँ पुस्तालाई यसबारे बुझाउने मान्छे नै छैनन् । मलाई त कस्तो चुनाव हुन लागेको हो, त्यो पनि थाहा छैन ।’ राजनीति आफ्ना निम्ति कालो अक्षर भैंसी बराबर भएको उनी बताउँछिन् ।
अर्की अभिनेत्री मेनुका प्रधानले चुनाव हुँदैछ भन्नेसम्म सुनेकी छन् । यसबाहेक उनलाई चुनावसम्बन्धी अलिकति पनि जानकारी छैन । ‘चुनाव भन्ने त सुनेकी हुँ,’ मेनुका भन्छिन्, ‘तर, कस्तो चुनाव हो ? केही पनि थाहा छैन ।’ उनलाई राजनीतिमा रत्तिभर चासो पनि छैन । ‘पोलिटिक्समा कत्ति पनि इन्ट्रेस्ट छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘तर, यसको इम्पोट्र्यान्स हुन्छ भन्ने चाहिँ थाहा छ ।’ ‘भोटर लिस्ट’मा मेनुकाको नाम छैन । नाम लेखाउनुपर्छ भन्ने आवश्यकताबोध पनि गर्दिनन् । ‘त्यतातिर कहिल्यै ध्यान गएन,’ उनको स्पष्ट ‘कन्फेसन’ छ, ‘भोट हाल्नुपर्छ भन्ने ‘फिल’ नै आउँदैन, अनि कताबाट लिस्टमा नाम हुन्छ ? ’
राजनीतिबारे खासै अभिरुचि नराखे पनि अभिनेत्री केकी अधिकारीलाई भने चुनावमा भोट हाल्नु नागरिकको दायित्व हो भन्ने लाग्छ । ‘राजनीतिमा खासै चासो छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘अहिले हुन लागेको चुनावबारे पनि धेरै कुरा जान्दिनँ । तर, भोट हाल्नु नागरिकको कर्तव्य हो भन्ने चाहिँ थाहा छ । र, भोट हाल्छु ।’
‘चुनाव भनेको नौटंकी हो’,
चुनाव आयो रे भन्छन् । के आयो, के आयोजस्तो लाग्छ । देशमा यत्तिका चुनाव भए, जनताले सुख पाए त ? विकास भयो त ? त्यसैले मलाई त चुनाव भनेको नौटंकी लाग्छ ।
मेरो घर कैलाली हो । त्यहाँ चुनाव पहिलो चरणमा हुन्छ कि दोस्रो चरणमा ? मलाई त त्यो पनि थाहा छैन । मैले अहिलेसम्म भोट हालेको छैन । भोटर लिस्टमा नाम छ कि छैन ? त्यो पनि थाहा छैन ।
राजनीतिमा चासो छैन । तर, देशको परिस्थिति र जनताको समस्या बुझ्नेले नेतृत्व पाओस् भन्ने चाहन्छु । फिल्म क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन राम्रो नायकको आवश्यकता भए जस्तै देश र जनताका लागि पनि राम्रो नायक खाँचो छ । धुर्मुस-सुन्तली र कुलमान घिसिङजस्ता मान्छे देशलाई चाहिएको छ।
राजनीतिमा चासो नदेखाउनु हाम्रो गल्ती होइन । हलसम्म दर्शकलाई तान्न सकिएन भने त्यो दर्शकको गल्ती होइन । फिल्म खेल्ने वा बनाउनेको गल्ती हो । त्यस्तै राजनीतिले जनतालाई आकर्षित गर्न नसक्नु राजनीतिज्ञहरूको कमजोरी हो । नेताहरू गतिलो काम गरेको भए पो हामीजस्ता नयाँ पुस्ताले राजनीतिमा चासो राख्थे ।
शनिवार, चैत ३, २०७४ ‘दाउरा उपहार’मा प्रियंका कार्कीको यो रुप (भिडियो)
मंगलवार, फागुन २९, २०७४ नयाँ रियालिटी सो ‘मेगा सिनेस्टार’ आउँदै
सोमवार, फागुन २८, २०७४ धुर्मुस-सुन्तली हेर्न ओइरिए दर्शक
शनिवार, फागुन २६, २०७४ सिमसिमेको रजत साँझ
शुक्रवार, फागुन २५, २०७४ वर्षा, शिल्पा र केकीको भिडन्त
शुक्रवार, फागुन २५, २०७४ बुद्ध लामाको पुरस्कारबारे एपीवान एचडीले यसो भन्यो
बिहीबार, फागुन २४, २०७४ नेपालमा कमेडी रियालिटी शो हुने
बुधवार, फागुन २३, २०७४ पुराना चलचित्र संरक्षण गर्दै ‘चलचित्र संग्रहालय’